musha Latin America Sporting Hunhu Usain Bolt Urubhabhatidzo Mubhuku Plus Untold Biography Facts
CB inopa Iyo Yakazara Nhau yeye sprint legend inozivikanwa se "Mheni". Our Usain Bolt Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvakakurumbira kubvira paudiki hwake kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira nhau yeupenyu hwake musati mazita uye mhuri. Kunyanya zvakadaro, vazhinji vanosiya uye ON-Screen inozivikanwa zvishoma nezvake pamusoro pake.
Hongu, munhu wese anoziva kuti anonyanya kutaridzirwa seye mukuru sprinter wenguva dzese. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Usain Bolt's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Usain Bolt Utano Hwehuwandu Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga
Usain St Leo Bolt akazvarwa musi we 21st yaAugust 1986 paSherwood Content muJamica. Akaberekwa kuna amai vake Jennifer Bolt (mupurazi) uye kuna baba vake Wellesley Bolt (muridzi wezvitoro).
Kunyangwe kuberekwa kwecheche Bolt kwaive pasina matambudziko, zvakaratidza kekutanga kuti mucheche uyo anozoratidza zviratidzo zvekusagadzikana, anotorwa se "anononoka" muchiitiko chakakosha.
“Bolt paakaberekwa akange anonoka kwevhiki nehafu. Nguva chete muhupenyu hwake ainonoka. Mavhiki matatu aberekwa, ndinorangarira ndichimusiya pamubhedha uye akapotsa adonha, ndakadzoka mumba uye anga achizvidhonza. Akanga akasimba kwazvo, kunyange ipapo. ”
akayeuka Amai vaBolt.
Wechidiki Bolt akakurira kuSherwood Zvemukati, musha unonyanya kuzivikanwa nenzvimbo yawo ine makomo yakavaka Bolt's sprint stamina.
Nekudaro, kumhanya-mhanya kwanga kusiri iko kwekutanga sarudzo yaBolt yemitambo yehucheche. Mudiki akatanga nekutamba kiriketi mumugwagwa neorenji, achishandisa chigutsa chemuti webhanana wicket. Yakawedzerwa kumitambo yake yehudiki yaive nhabvu dzidzo isati yamuudza kuti apinze bhizinesi.
Usain Bolt Utano Hwehuwandu Plus Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Bolt aive nedzidzo yake yekutanga kuWaldensia chikoro chepuraimari muSherwood Zvemukati. Ndichiri pachikoro, Bolt akaratidzira kugona kwake kukwikwidza mumakwikwi ezviitiko uye akazova mumhanyi anomhanya kwazvo pachinzvimbo (pamusoro pemamita zana kubva) paakanga achingova zera 100.
Achikwira chikwata chekudzidza, Bolt akaenderera mberi kuna William Knibb Memorial School kuchikoro muFalmouth Jamaica, kwaakasarudza kuita guru mucheketeti. Zvisinei, kushaya simba uye nekukurumidza kwaakaunza kumutambo, kwakaita kuti mudzidzisi wake wekricket akamukurudzira kuisa mano ake mukushandisa kuburikidza nekuedza kutsvaga.
Kuteerera kune mazano, Bolt akatora zvakakosha uye aifadzwa kuti adzidziswe naDwayne Barrett naPablo McNeil, aimbova mutambi wenhau yeOlymic Olympic. Doo akatungamira Bolt pamatambo ekugadzirisa akamuona achigadzira sirivha yake yekutanga munguva yeChiteteti yepachikoro chesekondari yepachikoro chepamusoro nekupedza mamiririri emitambo ye 100 mumashure 2001 chete.
Usain Bolt Utano Hwehuwandu Plus Untold Biography Facts: Road To Fame
Kune vechidiki Bolt, kumisikidza chimwe chinhu chaive padhuze nekufamba-pamusoro sezviri pachena mukushayikwa kwake kwekuzvipira pakudzidziswa, chiitiko chakashungurudza iye waraira murairidzi, Pablo McNeil. Zvakangodaro, Bolt anga achiri "pamusoro pemutambo wake", achikunda kugona kwake kwakanyanya mu2001 Caribbean Free Trade Association (CARIFTA) Mitambo nekupedzisa 200m mujaho pa21.81s pamwe ne400m mujaho pa48.28s.
Saizvozvowo, akaisa basa rinoshamisa pamutambo wake wekutanga wenyika yose, ye 2001 IAAF World Youth Championships muDebrecen, Hungary apo yaipfuura yepakutanga yake 200m yakanakisisa ne21.73s. Nyaya yeprint mukugadzira yaizozonyora kukosha kwakakosha, ichinyora zvinyorwa uye mapurisa emamashure mumakwikwi emakwikwi akatevera pakati pegore 2002 kusvika ku2003.
Zvisinei, zvakanakisisa zvakanga zvichiri kuuya kweBolt vakapedza chikoro chesekondari mu2004. Akamira pamusana we 6 netsoka 4 inches, Bolt akanga akagadzirira kuratidza kuti sprinter haafaniri kuva shoma sezvakaitika kare.
Usain Bolt Utano Hwehuwandu Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
2004 yaiva gore rakashata reBolt rakashandura unyanzvi pasi pekutungamirirwa nemudzidzisi mutsva, Fitz Coleman uye akatanga basa rake roumhizha nemakwikwi e3 gore iroro. Dzinosanganisira CARIFTA Mimhanzi muBermuda, World Junior Championships 'uye yakakurumbira' 2004 Athens Olympics 'uko yakatora kukuvadzwa kwegumbo, zvichiita kuti iye abvise mukutanga kwezviitiko zvemamita 200.
Zvisinei, matambiro ake haana kuzivikanwa nevakawanda kusanganisira makoreji eAmerica ayo akamupa ongororo yeScholarship, asi Bolt akaridza “kadhi remukomana wekumba” nekusarudza kudzidzisa mumakwara epakutanga eUniversity of Technology, Jamaica.
Mwaka 2005 yaive apo Bolt yakabatana nemurairidzi mutsva, Glen Mills uyo akamuita kuti atore imwe hunyanzvi nzira yemitambo. Paive pasi pekutungamira kwaGlen kuti Bolt yakanyora kukunda kwakawanda kwebasa rake rekutanga pakati pa2005-2007.
Kubudirira kwaBolt kwakazoguma nekukodzera kwake kwezviitiko zvekupedzisira zveOlimpiki zve2008 muBeijing uko akahwina 100m uye 200m nhangemutange muna 9.69s uye 19.30s (nyowani rekodhi) zvichiteerana, tisingatauri kuhwina goridhe mumakiromita 4 × 100 metres iyo yaaive akazobviswa muna 2017 mushure mechikwata-shamwari Nesta Carter akawanikwa aine mhosva yekushandisa doping.
Usain Bolt Utano Hwehuwandu Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Bolt iri panguva yeiyi positi isati yaroora. Pamwe Bolt 'asina kuroora nyika' ichiri kutsigirwa nemakore ake-akareba mafirosofi dzidziso sekureva kwenyaya kuti:
“Iwe hausi kuda kuroora uine 22! Kunyanya kana uine mukurumbira, nekuti vasikana vanenge vachizvikanda iwewe ”.
Zvakangodaro, Bolt yakave nehukama hwakakura nevazhinji vakadzi. Zvinosanganisira hukama hwake hwekutanga paruzhinji ne (1) economist Mizicann Evans (2004-2011), (2) fashoni dhizaina Lubica Kucerova (2011-2012) (3) mutambi wechiChirungu Megan Edwards (2012-2013) uye (4) Jamaican Compatriot, Kubvumbi Jackson (2013-2014).
Bolt iri panguva yeiyi positi ine hukama neJamaican Model Kasi J. Bennett. Akavhura nezvehukama hwake naKasi mu2017 nekuzarura kuti vanga vachidanana muchivande kwemakore matatu (kutanga kubva 2014). Zvinotarisirwa kuti "Mheni Bhaudhi" ingamhanye kusvika kumugumo nekutora hukama hwake hwazvino kumusangano.
Usain Bolt Utano Hwehuwandu Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
Bolt yakaberekerwa mumhuri ye6. Tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yemhuri yake.
Pamusoro pababa vake: Baba vaBolt, Wellesley Bolt anogara muSherwood Zvemukati maanoramba achishanda muchitoro chake chekutengesa.
Kunyange zvazvo baba vanotsigira vakafamba-famba nenyika yose neBolt, iye achiri kuda kugara mumba make.
Pamusoro paamai vake: Amai vaBolt, Jennifer Bolt anodawo kugara kuSherwood Zvemukati maanobatsira murume wake kubata chitoro chake.
Akafambawo neBolt kumativi ose enyika uyewo kuisa maitiro anooneka pamakwikwi ake enyika.
Pamusoro peHamu vake vana vomumba: Baba vaBolt vane vana 3 vaakaberekerwa kubva kunehumwe hukama. Ivo vanosanganisira mukoma-wehafu weBolt-hanzvadzi, Christine Bolt, mudiki hafu-mukoma Sadiki Bolt uye mudiki hafu-hanzvadzi Shrine Bolt.
Christine Bolt, akazvarwa mu1984 mukoma-wehafu weBolt. Iye murimi uye amai vakarambana vane vana vatatu.
Sadiki Bolt, akazvarwa pa1st yaApril 1987 ndibhudhi wehafu weBolt. Sadiki aive padhuze neBolt uyo anoona kuti imwe yeanofarira kuyeuka kwehudiki ndiwo mazuva aakapedza achitamba Cricket neBhora naye.
Sherine Bolt ndiye munin'ina-wehafu weBolt-hanzvadzi uyo anozivikanwa zvishoma nezvake.
Usain Bolt Utano Hwehuwandu Plus Untold Biography Facts: Sponsorships neBusiness
Semumhanyi, Bolt haigadzike pasi pemamirioni makumi matatu emadhora kubva kune vanomutsigira. Zvinosanganisira Puma (chipfeko), Regupol (tartan tracks), Gatorade (zvinwiwa), Hublot (wachi), Champion Shave (razors), Enertor (insoles), GH Mumm (waini inopenya) uye XM (kutengesa).
Vamwe ndiGibson (mahedhifoni), Kinder Joy (zviwitsi) Und Advil (chemishonga) Digicel, Virgin Media, Optus, Telkom, Fastweb, Sprint (ese ari makambani enhare). Iye zvakare ane hunhu hwake muTembere Mhanya yemitambo franchise (inoratidzwa pazasi) iyo yakadzorwa kanopfuura bhiriyoni rimwe nguva. Zvinotarisirwa kuti bhaudhi inova mumiriri wemhando dzambotaurwa kana chibvumirano chake chapera.
Achienderera kumabhizinesi ake ega, Bolt anoronga kuvhura chikafu chinokurumidza pasi pe "Usain Bolt's Tracks & Records". Iwo maresitorendi ayo angavhurwa kuUK achapa zvakajairika chikafu chinokurumidza cheJamaican senge yakashambiswa nyama yenguruve, mupunga uye bhinzi. Akabatanawo nekambani yekutamba nharembozha kuti agadzire yake arcade themed nhare mbozha inongodaidzwa kuti Bolt!. Uye zvakare, Bolt ine yake yekutora muunganidzwa naHublot, pamwe neyemusoro wefoni unonzi "Mweya naUsain Bolt".
Usain Bolt Utano Hwehuwandu Plus Untold Biography Facts: Football Career
Rudo rweBolt rwebhora rwakadzokera kumazuva ake ehudiki uye wakisi yakasimba kusvika nhasi. Akakurira achida Manchester United uye akamboratidza zvirongwa zvekufunga nezvebasa renhabvu mushure mekurega basa kubva kubhasikiti. Maererano naye:
"Ini ndinonyatsoda kuyedza nhabvu mushure mekurega basa nekuti ndakatarisa nhabvu mumakore apfuura uye ndinofunga ndinogona kuve mukwikwidzi akanaka".
Mwedzi yakati wandei wabva pamudyandigere muna 2017, Bolt akatanga bhizinesi rebhora chairo nekusayina chibvumirano chemavhiki e6 neAustralia Team, Central Coast Mariner uye kutanga kwake kukirabhu munaAugust 2018
Hazvina kutora nguva refu Bolt yakarova zvibodzwa zviviri parutivi rwake panguva yepamberi mwaka yekushamwaridzana neMacArthur South West United muna Gumiguru 2018. Zvirokwazvo zvinhu zvese zvinoshanda kune avo vanotenda.
Usain Bolt Utano Hwehuwandu Plus Untold Biography Facts: Personal Life Facts
Bolt mutambi wekutenda wekutenda uyo asingatongwi nemhirizhonga asi anotora pane imwe nharo yekukwikwidza pamusana pechikwata chake. Kusiyana nevamazuva ano vanoremekedza mukurumbira kutora tsika dzavo, Bolt inonyatsogadzirisa uye inochengetedza ukama hwakanaka uye kubva pamitambo.
Zvido zvake zvinosanganisira kutamba, kuterera mimhanzi uye kutamba mitambo yemavhidhiyo, hazvishamisi kuti akambobvumirwa kuva munhu ane usimbe. Mumashoko ake:
“Hongu, ndine husimbe. Hapana mubvunzo nezvazvo ”.
Vakawanda avo vakapa rutivi rwavo mukuumba mutambi kune iye nhasi ari kudavira kuti Bolt ingadai yakagadzirisa zvinyorwa zvisingafungidziri kana akaisa pfungwa pakudzidzisa zvakasimba kupesana nehupenyu hwake hudonistic.
Usain Bolt Utano Hwehuwandu Plus Untold Biography Facts: Other Facts
Bolt ine hwaro, inozivikanwa seUsain Bolt Foundation. Iyo yakatsaurirwa kudzidzo uye tsika kusimudzira kwevana.
Akatumidzwa zita rekuti Mheni Bolt nekuti dutu remheni rakapfuura nepamusoro pechadenga muNew York panguva yake yegore ra2013 yekupaza zvinyorwa.
Bolt yakagamuchira mucheche cheetah mu2013 ndokuitumidza "Mheni Bolt". Iye anobhadharira kuchengetedza katsi pamusha wenherera yemhuka muNairobi.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Usain Bolt Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Childhood Biography Diary- yeAmai SPRINTERS